I8 Purezidhendi Inonyanya Kuita Zvepabonde Munyika Yose AASraw
/Blog/Zvepabonde Zvinodhaka Poda/I8 Inonyanya Kuita Zvepabonde Pine Zvinodhaka Munyika
Posted on 08 / 29 / 2018 by 阿斯劳 akanyora Zvepabonde Zvinodhaka Poda.
Kurasikirwa kwebhuibido, mumadzimai nemadzimai, idambudziko rinowanzoitika, kazhinji nekuda kwekuneta, kushungurudzika, makore kana kungoita tsika. Kuti kumutsa chishuvo, pane zvinodhaka zvepabonde zvinoshandiswa kuwedzera izvi.
Mune 1998, Kudya uye Drug Administration yeUnited States neEurope (FDA neEFSA) yakabvumira ED yekutengeswa kwemari yeViagra (), iyo yakakonzera kunzwa kwenyika yose. Zvirwere zvemakiriniki sildenafil citrate 171599-83-0 inobudiswa mupepanhau rezvezvokurapa rinonzi New England Journal of Medicine.
Izvo zvinoshandiswa neMurume
Tadalafil (171596-29-5), inoshandiswa mukurapa kwekusavhiringidza kwe erectile. Iyo tadalafil inoshandisa zvinodhaka mu enzyme phosphodiesterase aina 5 (PDE-5) inotarisira kubvisa vasodilator nitric oxide, ikozvino inotengeswa sehwendefa pasi pezita rekutengeserana Cialis. Yakave ichangobva kugamuchirwa kurapwa kwepermonary arterial hypertension, uye yakashandiswa kune mamwe mamiriro. Mahwendefa eCialis, e5mg, 10mg uye 20mg emurasi, ndeaya mavara machena akafukidzwa nefirimu uye nenzira yeammond. Nhamba yakagamuchirwa yepermonary hypertension is 20 mg uye inotengeswa pasi pechiratidzo Adcirca.
Zvidzidzo zvekuchipatara zvakaratidza kuti tadalafil inogona kusimbisa hutachiona hwehuwandu hwemitrate yemishonga. Izvi zvinofanirwa kuva chikonzero chekusanganiswa kwe nitrate uye tadalafil pane nitric oxide / cGMP nzira. Saka, varwere vanotora chero maitiro e nitrates vanorambidzwa kutora chigadzirwa ichi.
Sildenafil citrate 171599-83-0 mushonga unoshandiswa kurapa erectile kusagadzikana uye pulmonary arterial hypertension (PPH). Sildenafil inogona kusarudza kudzivisa zviitiko zvePDE5 muvanhu. PDE5 inonyatsoratidzwa mupenisi sponge uye yakaderera mune mamwe maturusi uye nhengo. Mushure mekutora sildenafil, iyo corpus cavernosum vasomotor mhasuru inozorora pasi pechiito chemushonga, kuyerera kweropa kunowedzerwa, muviri wepavernous wakazara, uye nhengo yemurume inomiswa, zvichidaro zvichiita mhedzisiro yekurapa pane penile erectile dysfunction.
Varwere vane penile erectile dysfunction vane nguva yakasarudzwa yezviito zve 27 maminitsi mushure mokutaura nemuromo (chipatara data inoparadzaniswa pakati pe12 ne 70 maminitsi).
Vardenafil 224785-91-5 inoshandiswa kubata chirwere chepenile erectile. Izvi zvinodhaka chimiro 5 phosphodiesterase (PDE5) inhibitor. Kurairirwa kwemuromo kwechirwere ichi kunogona kubudirira kuvandudza hutano uye nguva yekumiswa nekuvandudza hutano hwepabonde hwevarume nevarume vane erectile dysfunction. Kutanga nekuchengetedza kwepenile erection kunobatana nekuzorodzwa kwe cavernous smooth muscle cells.
Mukuwedzera kune kushandiswa kubata chirwere chisina kumira erectile, vardenafil inogonawo kudzivirira kupera kusati kwatanga.
Avanafil 330784-47-9 imishonga yemishonga inobva kune boka re PDE-5 inhibitors rinoshandiswa mukurapa erectile dysfunction. Vardenafil ave achiratidzwa kuti ndeye chizvarwa chitsva che phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitor, uye vardenafil hydrochloride ine simba kwazvo, yakasarudzwa, uye inoregererwa zvakanaka. Kuuya kwahwo kwaunza hutsva hutsva hwekurapa erectile dysfunction (ED).
Zvinotora nguva yakareba sei kuti Cialis 20mg ishande?
Migumisiro ye PDE-5 inhibitors inoda kuti zvepabonde zvikwire. Zvichienderana nehutano hwemunhu uye kushivirira, chirwere chacho chinogona kuwedzerwa kusvika pahuwandu hwe 200 mg kana kuderedzwa kuva 50 mg. Kuenzaniswa nedzimwe PDE-5 inhibitors, kusarudzwa kwakanyanya kweaanafil nokuda kwephosphodiesterase-5 (PDE-5) yakaratidzwa, zvichiita kuti pave nekurerukirwa zviri nani.
Zydena (Udenafil 268203-93-6) yakagadzirwa muSouth Korea (ne Dong-A Pharm), yakatangwa mu2005. Udenafil is PDE-5 inhibitor. Zydena inonzi inodhaka yakachengeteka ye erectile dysfunction kunze kwekukuvadza kwakakomberedzwa kwakafanana nekusvibiswa kwemaonero, hapana mimwe miviri yakakomba yakawanikwa kusvika ikozvino. Asi iyo ndiyo nguva pfupi mumisika yemarudzi ose, pane zvidzidzo zvakawanda. Maminitsi e30 anodiwa kuti mushonga uite. Kupindira, fomu, kuenzanisa, nzira yekuita yakaenzana neViagra.
Flibanserin 147359-76-0 mishonga yakatanga kugadzirirwa kurapwa kwekushungurudzika, asi yakawanikwa isingashandi munzvimbo ino uye ikozvino yakabvumidzwa kurapwa kwehunyengeri hwekusagadzikana pabonde (HSDD) mumadzimai - zvisinei, kugona haina kusimbiswa pano yakonzera kukakavadzana kuzhinji pamusoro penyaya yeflibanserin (Addyi) nemhedzisiro yayo.
aasraw. com Mumakiriniki ekuedzwa, yakaratidza kuti ichi chinowedzera pakati pe0.5 ne1 nhamba yezviitiko zvepabonde zvakabudirira munguva yegore rimwe chete, zvichienzanisa ne placebo, ine mwero asi yakawandisa. Vakadzi vakapinda muchidzidzo vakaitanga nemavhareji pakati peC2 uye 3 zvigadziro zvepabonde zvepamwedzi.
Flibanserin HCL Mechanism of action, inoshanda pamagariro eurotransmitter, zvose zvinonakidza uye zvisingabvumirwi. Kuburikidza nechigadzirwa chegonist pane 5-HT 1A receptors ye serotonin, chimiro chakafanana neicho chemishonga yakasiyana-siyana inorwisa zvinodhaka uye kuburikidza nechiito chinopesana cha 5-HT 2A receptors.
Dapoxetine HCL 119356-77-3 inodhaka inoshandiswa pakurapa kusati kwasvika. Iyo ndiyo serotonin inosarudza reuptake inhibitor yenguva pfupi uye chiito. Pachikonzero chechiitiko chekare chekudzidza, katatu kusvika kuchina-kupfurikidza kwenguva yakareba yenguva yekudzivirira kwemazuva ejaculation inogona kufungidzirwa. Mukuwedzera, dapoxetine inogona kugadzirisa kugutsikana kwepabonde uye kuonekwa kunoona pamusoro pekunyengera kwevarume, uye kuderedza kutambura uye zvinetso zvakaoma.
Dyclonin HCL 536-43-6 inonzi antichetic inogadzirwa nehutachiona inogona kushandiswa kweanesthesia ye mucous membrane pamberi pekuongororwa kwechiremba uye nzira. Inowanikwawo mulozenges uye sprays yehuro nehuro. Dyclonin inogona kushandiswawo kudzivisa gag reflex.
Ichi chigadzirwa chinogona kudzivisa kutapurirwa kwemaitiro akasiyana-siyana emafungiro emagunha kana kusagadzikana, kunodzivisa pfungwa yekubata uye kurwadziwa, uye ane analgesic, antipruritic uye mabhakitiriki emigumisiro paganda.
Ichi chigadzirwa inonhuhwirira ketone yeruwa inzvimbo yeanesthetic. Iine nguva yekutsanya uye inogara kwenguva refu. Iyo ine antipruritic, analgesic uye mabhakitiriya emigumisiro paganda.
Mhedziso uye kukurudzira
Zvikonzero zvekutora zvepabonde zvinodhaka
Chirwere chepabonde chinogona kukubatsira kugadzirisa zvimwe zvinetso. Zvisinei, kana mushure mokunge uchingokurudzira kwekanguva, dambudziko rako harina kugadziriswa, usanono kutaurirana unyanzvi (sexologist kana kuti chiremba) kuti abudise dambudziko rako. Iyi yekupedzisira ichakupa mazano uye zvigadziro zvekurwa naro. Heano pane zvakasiyana-siyana zvinangwa zvechirwere chepabonde.
-Kuita kuti uwanezve mufaro mune zvepabonde
Heino chinangwa chikuru chechirwere chepabonde: kubatsira vanhu kuti vafare kana vachiita zvepabonde nemumwe wavo. Nokuda kweizvi, zvakakosha kuti tifungisise kuyerwa kweiyo mubhokisi bhizinesi, asi kana iwe uchiremekedza, libido yako inogona kukudziridzwa chete uye chido chemashoko ako chinogona kuwanikwa chete.
-Kurwisana nekudzivirira matambudziko uye kurwisana nezvinetso zvekugadzirisa
Kana iwe ukatarisana nedambudziko rekumira, mushonga wepabonde unogona kukubatsira kurwisa. Kunze kwekurwa neichi chirwere, iwe unowana zvakare kugutsa bonde uye iwe unogona kugutsa mumwe wako pasina kutya "kuputsika" panguva yechiito; kunetsa uye kunonyadzisa kunzwa panguva.
Vakadzi havangagoni kudzivirirwa kana. Zvakare, kurwisa dambudziko iri, kutora chirwere chepabonde kunogona kufadza. Nevakadzi ava vekupedzisira, mabote ako achapera uye iwe uchazonzwa uchizadzikiswa paunenge uchiita.
- Kuvandudza hutano hwako uye hukama hwako
Iwe unoda kuva nehupombwe hwakanyanya here? Iwe unorota zvekuwana mufaro panguva yezviito zvako here? Chirwere chepabonde chinogona kukubatsira kuti uwanezve manzwiro iwayo! Ichi chigadzirwa chinogona kutorwa nevarume pamwe chete nevakadzi vanoda kurarama hutano hwakasimba uye vanoda kuti hukama hwavo huitike mumamiriro ezvinhu akanaka.
Kubata chirwere chepabonde kuchava rubatsiro rwakakura uye kuvonga kwaari, ukama hwepedyo hwako huchava hwakakwana kupfuura!
-Kosimbisa libido yako
Munguva yehupenyu, panogona kuve nenguva apo murume kana mukadzi asingachadi kuita bonde newavakaroorana naye. Dambudziko iri rinonyanya kuve repfungwa uye rinogona kukonzerwa nezvakasiyana zvinhu: kuneta, matambudziko emunhu, kushushikana… Izvi zvinogona kukonzera kudonha mu libido uye mafaro.
Kuti uwanezve manzwiro aya maviri, kutora chirwere chepabonde kunogona kubudirira. Zvechokwadi, inogona kukubatsira kuti uwedzere libido yako uye uwanezve chimwe chido chepabonde!
Uye kana iwe uchida mamwe mazano ekuwedzera nguva yekufara, heino chinhu chinokosha!
Chii chinonyanya kukosha zvepabonde kwevarume?
Parizvino, kune vazhinji vanoita zvepabonde zvinokurudzira varume pamusika. Kusarudza nekutenga zvakanakisisa zvingave zvakaoma uye hazvisi zvisizvo kuti uzviwanire iwe wakarashika mukutarisana nezvisarudzo izvi zvakawanda. Muchikamu chese chinyorwa ichi, ndinokupa mishonga yakasiyana-siyana inobata zvepabonde iyo ichakubatsira kuti uvandudze libido yako zvechokwadi!
Asi usati wazviwana, ziva kuti chinhu chekutanga chekuita ndechekutaura nachiremba wako. Uyu nyanzvi achakuudza kana kutora zvinokurudzira zvinodiwa uye kana zvichienderana nehuwandu hwehutano hwako. Muzvimwe zviitiko, huwandu hwemabhizimisi ezvepabonde zvinoshandiswa seViagra kana Vialis zvinogona kupiwa chete pamutemo wezvokurapa uye naizvozvo zvinosungirwa kubvunzurudza chiremba kana iwe uchida kuzviwana.
Uyewo, zvakasiyana-siyana zvinowanikwa pasi apa hazvisi aphrodisiacs. Havasipo kuti vawedzere libido yako, asi chinangwa chekuwedzera kubuda kweropa zvakananga mumuviri wako kuti uwane uye uchengetedze erection yakakodzera munguva yako yepabonde.
Izvi zvinokurudzira zvichakubatsira iwe kuva nekugutsikana, asi kwete pasina kushanda. Kuti zviitike, kurwisana kwepabonde kuchafanirwa kuiswa panzvimbo.
MAGL inhibitor uye FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750 I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we2021